‘महँगो प्रेम’ जो धेरै दिन टिक्दैन – Rapti Khabar
जुनु राना !
पैसा हेरेर जोडेको सम्बन्ध धेरै दिन टिक्दैन !
अहिले सामाजिक संन्जालमा ओझा र सिल्पाको चर्चा छ । तर के ओझा मात्रै गलत छन त ? ओझालाई छोरी दिनेहरु /ओझा संग सम्बन्ध गाँस्न आउनेहरूको बिनाकारण बिनास्वार्थ आए ? पैसा र नाम हेरेर गाँसेको सम्बन्ध टिक्दैन । कतै टिकेको छ भनेपनी श्रीमान/ श्रीमतीले कि त सम्झौतामा सम्बन्ध चलाउछन कि प्रेम बाह्य नै चलेको हुन्छ । (सबैको नहोला)
ओझा र ओझाका नातापाता यता पनि छ । जसले बुहारी / श्रीमतीलाई यतिसम्म मानसिक र शारीरिक अत्याचार गर्छन कि , ती श्रीमतीहरु मानसिक रुपमा बिछिप्त हुन्छन । लगातार शारीरिक र मानसिक यातनाको क्रममा केही लाई हत्या सम्म गरिन्छ र हत्या पछि आत्महत्याको हल्ला फिजाईन्छ भने केही मानसिक संन्तुलन गडबडको अवस्थामा छ्न ।
उनिहरुमा पैसा र खान्दानको रवाफ यति सम्म हुन्छ कि पैसा संग इमान किन्न र बेच्न ति कति पनि हडबडाउदैनन । उसै त केहि नेपालीहरु हङकङ आइडीको निम्ति जे जस्तो सुकै गरेर आउन चाहन्छन भने हङकङ आइडीको बलबुटाले कतिपय असमान्य कुराहरु पनि मान्य बन्छन । जस्तो; आइडी कै बलमा एउटा अधबैंसे पुरुषले पारपाचुके पछि आफुभन्दा दस /पंन्ध्र बर्ष सानो उमेरकी श्रीमती बिहे आफूभन्दा साना उमेरका श्रीमान रोजेर बिहे हुन्छ ।
लेखिका: जुनु पुन हाल हंकंग हुनुहुन्छ
यसरी पैसा र आइडीको आवरण हेरेर गरिने लगनगाँठोमा आपसी प्रेम र समझदारी कम हुन्छ। फल स्वरुप सम्बन्धमा तिक्तता आउनु स्वाभाविक हो । पैसाको आडमा पाईने खुशिले क्षणिक आनन्द त मिल्छ तर दीर्घकालीन खुशीको अनुभुती कदापि हुँदैनन ।
आजको समयमा पैसालाई सबैभन्दा बढी महत्व दिईनुले पनि यस्ता सम्बन्धहरु बढी प्रयोगमा आएका हुन्छन । फलस्वरूप यसको नतिजा सम्बन्धमा चिसोपना, कलह, घरेलु हिंसा र हत्या सम्म आएर टुंगिएका छन ।
चाहे जो हो, केटा वा केटि । पैसा र कुनै खान्दानको हेरेर सम्बन्ध गाँस्नु भन्दा उचित मान्छेको व्यबहार हेरेर बुझेर अगाडि बढ्नु बुद्धिमानी ठहरिन्छ । तर यहाँ कसलाई के भन्नू ! मान्छेले पढेर सुनेर होइन भोगेर मात्रै चेत पाउँछ ।
-जुनु रानाको फेसबुकबाट
मध्यरातमा छविले लेखे: शिल्पा जी छबीको अदालतमा आउनुस, न्याय पाउनु हुन्छ !